ဇွန် 2017 |4၏စာမျက်နှာ 68 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 4)
switcher ဗစ်ကွန် 3.3 မှာ switcher စတူဒီယို v 2017 လွှတ်တင်; နယူးအင်္ဂါရပ်များ Facebook ကတိုက်ရိုက်, YouTube ကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးရှင်များအတွက်တိုက်ရိုက်လွှအတွေ့အကြုံ Boost
switcher စတူဒီယို v3.3, လုံးဝဆန်းသစ်ထားတဲ့ UI ကို Features In-App ကို Facebook မှာတိုက်ရိုက်မှတ်ချက်စောင့်ကြည့်ထည့်ပေးသည်နှင့်ကိုးကင်မရာများကိုမှ Add နှင့် Sync Up ကိုမှနိုင်ခြင်း Louisville, KY (ဇွန်လ 21, 2017) - switcher Inc ကို (www.switcherstudio.com) ယနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ၎င်း၏ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းအချို့ကြီးတွေ updates များကိုအတူဤရက်သတ္တပတ် Anaheim,, CA အတွက်ဗစ်ကွန် 2017 မှပြန်လာခြင်းဖြစ်သည် ...
နှစ်ပေါင်း Plura အသံလွှင့် Inc ၏နံပါတ်များအတွက်လျှောက်လွှာများ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြင့်ဆုံးအဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပညာများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Plura 4KXpress UHD / 4K Multi-format နဲ့ဗီဒီယိုက Processor ကိုစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာနှင့်အနာဂတ် applications များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်ထောက်ပံ့သောယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ NAB 2017, Quad SDI (စတုရန်းမိုင်ကနေ & ဖို့ bi-directional 12G စဉ်အတွင်းမိတ်ဆက်ပြသ ...
နှစ်ပေါင်း Plura အသံလွှင့် Inc ၏နံပါတ်များအတွက်လျှောက်လွှာများ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြင့်ဆုံးအဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပညာများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Plura 4K Xpress UHD / 4K Multi-format နဲ့ဗီဒီယိုက Processor ကိုစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာနှင့်အနာဂတ် applications များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်ထောက်ပံ့သောယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ NAB 2017, Quad SDI ထံမှ & ဖို့ bi-directional 12G စဉ်အတွင်းမိတ်ဆက်ပြသ ...
Cinegy Huawei ကမီဒီယာတိမ်တိုက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းကျော်ပြီ
မြူးနစ်, ဂျာမနီ, 28 ဇွန်လ 2017 - Cinegy ယနေ့ Cinegy ရဲ့မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပြည့်အဝ Huawei ၏မီဒီယာတိမ်တိုက်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းလွန်ပြီကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများမကြာမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Huawei မြူးနစ် OpenLab, မိတ်ဖက်နှင့်အတူပူးတွဲ, ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-မောင်းနှင်အိုင်စီတီဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းထူးချွန်၏ဗဟိုအတွက် Cinegy အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာခဲ့ကြသည် ...
ဗီဒီယိုကိုညီလာခံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - စတုဂတ်, ဂျာမနီ
ရာထူး: ဗီဒီယိုကွန်ဖရအင်ဂျင်နီယာချုပ် - စတုဂတ်, ဂျာမနီကုမ္ပဏီ: CSRA တည်နေရာ: သင်အောင်မြင်မှုရရန်လာနိုငျဘယ်မှာ Chantilly VA သို့အမေရိကန်အကြီးဆုံးစင်ကြယ်သော-play အမျှအိုင်တီအမေရိကန်အစိုးရကဏ္ဍအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ, CSRA ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရေးနှင့်သင့်အောင်မြင်မှုအဘို့အအရင်းအမြစ်များတစ်ခုခင်းကျင်းကိုရယူသုံး, တစ်ဦးပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် join ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဇယားကိုကူညီအဖြစ်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ကိုယူ ...
Windows Server အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: Windows Server အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Intellisoft Technologies ကတည်နေရာ: အမေရိကန်ကောင်းမွန်သောနံနက်ရေးအဖွဲ့, နိမ့်ဆုံးလုပ်ခလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာမှ: W32 အပေါ်တစ်နာရီကို $ 35 မှ $2max ကို။ တည်နေရာ: 100% ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် Tarrytown, နယူးယော့အတွက် - 25 မိုင်မြောက်ဘက်မန်ဟက်တန်၏။ အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရဲ့ထိပ်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတည်နေရာထားပါ။ Duration: စာချုပ်ကအနည်းဆုံး3နှစ်ပေါင်းအဘို့ဖြစ်၏။ အင်တာဗျူးများ: 1st ဖုန်းကျော်ကဖြစ်လိမ့်မည်။ ...
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Entry-level ကို Jr Tech မှရှာယူ
ရာထူး: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Entry-level ကို Jr Tech မှကုမ္ပဏီမှုရှာ: အစင်းကျားတည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့သည်ရုပ်ပုံမှဖော်စပ် VO / Vox မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အဘို့အသံကိုဒီဇိုင်းနှင့်ဂီတဖန်တီးခြင်းအပါအဝင်အားလုံးရိုးရာ post ကိုအလုပ်ပေးအနေနဲ့ audio က Post-လိုလားသူအိမ်သူအိမ်သားပါပဲ ရုပ်ရှင် / ရဒေီယို။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယျသို့ဆိတ်ကွယ်ရာသတ်မှတ်? ကျနော်တို့ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းမှခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်ဂီတ-မောင်းနှင်အကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ရှာနေ ...
4 ၏စာမျက်နှာ 68«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»